Liza mawala igagasi lemibhikisho ku-Ortega | Bayede News
Home/ Ipolitiki/Liza mawala igagasi lemibhikisho ku-Ortega
UMENGAMELI weNicaragua uDaniel Ortega uzithola esephendukelwe abantu bakhe njengoba nsuku zonke begcwala imigwaqo bebhikishela ukuthi ehle esikhundleni. Le mibhikisho eyaqala zili- 18 kuMbasa wanyakenye ngokwezibalo ze-Organization of American States (OAS) zangoNcwaba wanyakenye isidlule nemiphefumulo eyevile kwangama-317 ngenxa yokungukungenelela ngesihluku kwamaphoyisa kanye nombutho wezempi emizamweni yabo yokulawula isimo. Kungokokuqala emlandweni waleli lizwe ukuthi kufe abantu abangaka esikhathini esincane kusukela kwaphela impi yokubanga amandla ombuso ngowe-1979 eyayiphakathi kweFrente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) eyayiholwa uDaniel Ortega kanye noHulumeni ka-Anastasio Somoza Debayle eyayiqale ngowe-1979.
Imbangela yale mibhikisho kwaba ukwehluleka kukaHulumeni ka-Ortega ukulawula umlilo owashisa wabhubhisa amahlathi amqoka kubantu baseNicaragua njengoba ukuvikela imvelo kuyinto ebaluleke kakhulu kuleli lizwe. Ukusha kwalawa mahlathi kanye nezilwane ezazikuwo kwabenza abantu bavuka inja ebomvu okwabe sekuphoqa u-Ortega ukuthi athule izinhlelo zokuvuselela imvelo kuleli lizwe. Izinqumo azithatha zokunciphisa imali yempesheni kanye nesokuvuna umbutho wezempi ngaphezu kwamaphoyisa kaHulumeni kwamdonsela amanzi ngomsele u-Ortega. Abantu bakhala ngokuthi ukuvuna umbutho wezempi ngaphezu kwamaphoyisa kubakhumbuza isikhathi sika- Anastasio Somoza Debayle esasinesihluku kubantu. Ukukhula kwemibhikisho elwa nobuholi buka- Ortega kwadala ukuthi abamesekayo baziphendulele ngempi ngosuku lokuqala lapho okwathelwa othulini abangama-25, okwabe sekungukuqala kodlame eNicaragua. Ngethemba lokunqanda isimo u-Ortega wabe esehoxisa izinhlelo zakhe zokunciphisa imali yempesheni kodwa kwaba zinhlanga zimuka nomoya njengoba abantu baveza ukuthi sebembekezelele kwanela. Ngokwentatheli yakhona eNacaragua uDanae Vilchez kwakungeke kusamsiza ngalutho ukuhlehla ezinhlelweni zakhe u-Ortega njengoba indaba yayingasekho ngahlele ukukwenza kodwa yayisingokwehla kwakhe esikhundleni.
U-Ortega unukwa ngoxhaxha lwamacala okubalwa kuwo inkohlakalo, ukuzama ukulawula abezindaba, kanye nokubusa ngesandla sensimbi okuyizinsolo ezimlandele kusukela ngowezi-2007 engena ihlandla lesibili kwesobumengameli emva kokuthi wayengumengameli nangowe-1979 kuya kowe- 1985. U-Oterga usehlandleni lakhe lesine njengoMengameli waseNacaragua okwakuyinto eyayingavumelekile ngokomthethosisekelo ngaphambi kowezi-2014 ngesikhathi iPhalamende elibuswa inhlangano yakhe iFSLN lakhetha ukuguqula umthethosisekelo lathi akumele abe mabili kuphela amahlandla uma elandelana umengameli angakwazi ukuba sesihlalweni ngawo. Isivumelwano sasePhalamende sathi ongumengameli angaphatha ngisho namangaki amahlandla inqobo nje uma abantu besamvotela.
Okunye osekubalwa ababhikishi njengezinye zezizathu zokuthi u-Ortega ehle esikhundleni ukuthi ngowezi-2016 waqoka umkakhe uNkk uRosario Murillo njengesekela likamengameli, okuyinto eyayinganakiwe ngesikhathi isenzeka kodwa manje osekushaywa amakhala ngayo njengoba sekubukwa njengezinye zezindlela zika- Ortega zokwenza iNicaragua ifa lo mndeni.
Inkampani yabacwaningi iMNC International ibika ukuthi amaphoyisa kanye nombutho wezempi basebenzisana nezinhlangano ezisebenzisa udlame ezeseka u-Ortega ukuzama ukunqanda le mibhikisho. Ngokombiko wale nkampani uHulumeni ka- Ortega ulayela izinhlangano eziwesekayo umbutho wezempi kanye namaphoyisa ukuthi adubule abulale ababhikishi, okuyingakho isibalo sabafayo sikhula usuku nosuku. Nakuba uHulumeni ka- Ortega uziphika lezi zinsolo kodwa inhlangano elwela amalungelo abantu eNicaragua i-Inter American Commission on Human Rights ibika ukuthi kuyinhloso kaHulumeni ka-Ortega ukusabisa abantu ngesihluku ukuze bezoyeka ukubhikishela ukuthi aphume. Ngokwale nhlangano bangaphezu kwenkulungwane abantu abalimalile ngenxa ka-Ortega.